AI/藍 Kusatsu indlu yesimbo saseJapan - I-Airbnb
AI/藍 Kusatsu indlu yesimbo saseJapan
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMitsuko
Uphawu lwale ndawo yiNtaba engaphambili isasazeke ngokubanzi phambi kwendawo, kwaye ungonwabela ukutshona kwelanga okuhle kakhulu kunye namagqabi ekwindla. Le yindlu yemveli yaseJapan. Inomoya opholileyo. Umgangatho Wokuqala. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukupheka.
kumgangatho wesibini yindawo yokulala enamagumbi ama-2. I-Kusatsu idume ngendawo enokubona iYubatake kunye ne-Otakinoyu. Sizele bububele obufudumeleyo kuni. Ukuba unemibuzo malunga negumbi.
Ungasebenzisa indlu yonke kwaye ukuya kuthi ga kwi-5 abantu banokuhlaliswa. Kukho indawo yokuhlala kunye neyokutyela kunye negumbi lesitayela saseJapan kumgangatho woku-1, kwaye unokupheka kwimarike enkulu ekhitshini. Umgangatho wesibini yindawo yamagumbi okulala ama-2 iiseti ze-5 Futon (oomatrasi baseJapan) ziyafumaneka.
I-Kusatsu iyafikeleleka ukusuka eTokyo; ukusuka kwisikhululo sebhasi saseKusatsu kuyakuthatha imizuzu esi-7 ngeenyawo.
Iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi ezifana ne "Yubatake" kunye ne "Mount Shirane" nazo zikufuphi.
・ Sineseti zomgangatho wesibini ze-5 Futon (oomatrasi baseJapan) ziyafumaneka.
・ Kukho igumbi lokuhlambela eli-1, iishawari ezi-1, izindlu zangasese ezi-1 kunye nesitya sokuhlambela esinye, esiluncedo kakhulu.
・ Silungisa izixhobo zokomisa iinwele, iitawuli zokuhlambela, iitawuli zobuso, ishampu, isilungisi kunye nesepha yomzimba.
・ Amagumbi okulala akumgangatho wesibini kunye negumbi loku-1 laseJapan, kwaye kuyafuneka ukuba unyuke izinyuko.
・ Kukho iindawo ezininzi zokujonga onokuthi uzindwendwele ngokuhamba kwindawo yethu. Ungakonwabela ukubona indawo kunye namava anjengokutya isidlo sasemini e "Yubatake", "Mount Shirane", "Hot spring", njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Mitsuko
・ Emva kokubhukisha, siya kukuthumelela uxwebhu oluneenkcukacha olushwankathela indlela yokufikelela kunye nendlela yokungena. Ukongezelela, ukuba kukho umbandela ongxamisekileyo, sinokuleqa kweso sakhiwo ngokukhawuleza. (Kungathatha ixesha ngokuxhomekeke kwixesha okanye usuku lweveki.)
・ Emva kokubhukisha, siya kukuthumelela uxwebhu oluneenkcukacha olushwankathela indlela yokufikelela kunye nendlela yokungena. Ukongezelela, ukuba kukho umbandela ongxamisekileyo,…
Inombolo yomthetho: M100020446
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kusatsu, Agatsuma-gun